Izany fiainana manokana mametraka politika ny fomba fampiasana ary miaro misy vaovao fa manome rehefa mampiasa tranonkala ity. dia hanao izay hifehezana fa ny fiainana manokana dia voaaro. Tokony mangataka aminareo izahay mba hanome fanazavana sasany izay azonao ho fantatra rehefa mampiasa tranonkala ity, dia afaka mahazo antoka ianao fa ho ampiasaina ihany araka ity fanambarana fiainana manokana. Mety hanova politika izany indraindray amin'ny alalan'ny fanavaozana ity pejy ity. Tokony jereo ity pejy ity indraindray mba hahazoana antoka fa faly amin'ny fanovana.
hifandray anisan'izany ny adiresy mailaka vaovao
isan'ny mponina vaovao toy ny Postcode, tiany sy mahaliana
vaovao hafa manan-danja ny mpanjifa fanadihadiana sy / na ny tolotra
Fa ny lisitra ny mofomamy no manangona mahita ny Lisitry ny mofomamy no manangona faritra.
Vaovao izany isika mitaky ny hahatakatra ny zavatra ilaina ary manome anao ny tsara kokoa asa fanompoana, ary indrindra fa noho ireto antony ireto:
Anatiny ny fitandremana ny firaketana an-tsoratra.
Mety hampiasa ny vaovao mba hanatsarana ny vokatra sy ny tolotra.
Mety tsindraindray mandefa mailaka ny dokam-barotra momba ny vokatra vaovao, tolotra manokana na fampahalalana hafa izay ataontsika Mety mahaliana anao mampiasa ny adiresy mailaka izay efa nanome.
Indraindray isika, dia mety koa ny mampiasa ny vaovao mba hifandray anao noho ny tsena fikarohana tanjona. Mety hifandray amin'ny mailaka ianao, an-tariby, na ny namany Sary tahadika. Mety hampiasa ny vaovao mba ampanjifaina ny tranonkala araka ny mahaliana.
Ny mofomamy kely dia rakitra izay mangataka fahazoan-dalana mba ho apetraka eo amin'ny fiara mafy ny solosaina. Rehefa manaiky, ny rakitra dia nanampy ary ny mofomamy dia manampy hamakafaka tranonkala ny fifamoivoizana na mamela fantatrao rehefa mitsidika toerana iray manokana. Cookies mamela ny tranonkala fangatahana mba hamaly ho anao manokana ireo. Ny fampiharana aterineto atao koa ny mampifanaraka ny asa amin'ny ny zavatra ilaina, tiany sy tsy tiany amin'ny alalan'ny fanangonana sy ny fahatsiarovana vaovao momba ny safidinao.
Ampiasaintsika fifamoivoizana vatan-kazo mofomamy mba hamantatra izay pejy ireo dia ampiasaina. Izany dia manampy antsika hamakafaka angon-drakitra momba ny tranonkala pejy fifamoivoizana sy hanatsara ny tranonkala mba mampifanaraka izany amin'ny zavatra ilain'ny mpanjifa. Isika ihany no mampiasa izany vaovao ho an'ny antontan'isa fanadihadiana tanjona ary avy eo ny rakitra dia esorina avy amin'ny rafitra.
Amin'ny ankapobeny, Cookies manampy antsika hanome anao ny tsara kokoa namany Sary, amin'ny manampy antsika mba hanara-maso izay pejy hitanao mahasoa sy izay tsy. A mofomamy tsy mba manome antsika ny fidirana ao amin'ny solosaina, na ny filazalazana momba anao, hafa noho ny angon-drakitra misafidy ny hizara aminay. Afaka mifidy ny hanaiky na mandà mofomamy. Ny ankamaroan'ny tranonkala navigateur manaiky mofomamy ho azy, fa afaka manova ny navigateur matetika fametrahana ny mandà mofomamy raha tianao. Mety hisakana anao tsy mandray tsara ny vohikala.
Mety misafidy ny mametra ny famoriam-bola na ny fampiasana ny mombamomba amin'ny fomba manaraka ireto:
na oviana na oviana ianao nangataka mba hameno amin'ny endrika ao amin'ny vohikala, jereo ny efajoro fa afaka tsindrio raha milaza fa tsy tianao ny vaovao mba ho ampiasain'ny na iza na iza ho an'ny tanjona ara-barotra mivantana
raha toa ianao ka teo aloha nanaiky anay mampiasa ny mombamomba ny mivantana barotra tanjona, dia mety hiova hevitra na oviana na oviana amin'ny alalan'ny fanoratana na emailing antsika amin'ny sales@armati.biz
Dia tsy mba hivarotra, mizara na lease ny mombamomba ny antoko fahatelo raha tsy manana fahazoan-dalana na ny takian'ny lalàna mba hanao izany. Mety hampiasa ny mombamomba anao mba handefa vaovao dokam-barotra momba ny antoko fahatelo izay ataontsika dia mety mahaliana raha milaza amintsika fa te izao hitranga.
Mety mangataka tsipiriany ny mombamomba izay hazonintsika momba anao eo ambany fiarovana ny Data Act 1998. Ny sarany kely dia ho hofany. Raha tianao ny dika mitovy amin'ny fanazavana natao ny anao dia manorata any.
Raha mino ianao fa misy vaovao no mitana anao dia diso na tsy feno, dia manorata any na handefa mailaka antsika raha vao araka izay azo atao, amin'ny adiresy etsy ambony. Ho avy hatrany hanitsy misy fanazavana hita fa diso.
Lisitry ny mofomamy no manangona
Ny latabatra eto ambany ny lisitry ny mofomamy isika hanangona ary inona no fanazavana izy ireo hitahiry.
Ny fikambanana amin'ny lisitry ny hovidiana.
Fivarotana ny teny Info eo amin'ny pejy, izay mamela ny haneho pejy haingana kokoa.
Ny zavatra izay anananao ao an-Ampitahao amin'ny lisitra Products.
Ny nisafidy vola
An voaaro dikan-ny mpanjifa ID amin'ny fivarotana.
Ny famantarana raha amin'izao fotoana izao fa tafiditra ao amin'ilay fivarotana.
An voaaro dikan-tenin'ny vondrona mpanjifa anao an'ny.
Fivarotana ny Customer Faritra ID
Ny sainam-pirenena, izay midika na dia manan-kilema caching na tsia.
NY TENDRONY ALOHA
Ianao sesssion ID amin'ny lohamilina.
Ahafahanao vahiny mba manova ny baiko.
Ny sokajy farany anao nitsidika.
Ny vokatra farany indrindra efa nijery.
Dia midika raha mba misy hafatra vaovao efa nahazo.
Mampiseho na dia mahazo mampiasa cache.
Ny rohy ny vaovao momba ny sariety sy ny fijerena tantara raha efa nangataka ny toerana.
Ny ID ny misy fifidianana vao haingana ianao no nifidy in.
Information tamin'ny fitsapan-kevitra inona no efa nifidy teo.
Ny zavatra izay efa vao haingana ampitahaina.
Information amin'ny vokatra efa Nanoratra e-mail amin'ny namana.
Ny fivarotana na ny fiteny fijery efa voafantina.
Dia midika raha mba misy mpanjifa mahazo mampiasa mofomamy.
Ny vokatra izay efa vao haingana nijery.
An voaaro lisitry ny vokatra koa ny Wishlist.
Ny isan'ny zavatra ao amin'ny Wishlist.